ULinda ubeneqoqo lonke lazo (kanye neminye imiklamo eyingqayizivele), isethi ngayinye igxile kumagama angukhiye ahlukile nemishwana, konke kunemininingwane yakhe yokuxhumana ngemuva! Yeka ukudala okuhle kakhulu! Ngicabanga ukuthi ukube bengingabafana bakwaWordle, bengizoqasha uLinda ngimbeke ophethe ukwahlukaniswa kwamakhadi ebhizinisi!
ULinda manje ubheke phambili emsebenzini omusha njengeWebhu, iWeb 2.0, nePrinta Technology Coach. Ungahle uthande ukumnika ucingo ngemibono ethile yasekuqaleni! Ngifisa sengathi ngabe ngacabanga ngalo mbono lapho ngikhuluma ngawo ukukhetha amakhadi ebhizinisi kuleli viki! Angiqiniseki ukuthi uLinda ufuna umsebenzi wesikhathi esigcwele - kufanele ubuze ukuthi ngabe unethuba lomthengisi wewebhu osebenza kahle, noma kunjalo.